E-News Nepali || Fast and Accuracy » नासाले भेटेको नयाँ उपग्रहको मूल्य: सबैलाई पुग्छ एक बिलियन पाउण्ड !
नासाले भेटेको नयाँ उपग्रहको मूल्य: सबैलाई पुग्छ एक बिलियन पाउण्ड !
एजेन्सी । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले विश्वका सबै जनसंख्यालाई करिब १ बिलियन पाउण्ड बराबरको सम्पत्ति बाँड्न सक्ने स्रोत भेटेको बजनाएको छ । नासाले एउता यस्तो उपग्रह (एस्टेरोयड) पत्ता लगाएको दावी गरेको छ जसमा रहेको फलाम बेच्दा विश्वमा रहेका सबै जनसंख्याको भागमा १ बिलियन पाउण्ड पुग्नेछ ।
नासाले खोजेको उक्त उपग्रह पुरै फलामले बनेको छ । जसको नाम १६ साइकी राखिएको छ । उक्त उपग्रहमा रहेको फलामको मूल्य करीब ८ हजार क्वाड्रिलियन पाउण्ड हुने नासाले दावी गरेको छ । विश्वका जनसंख्यालाई प्रतिव्यक्ति १ बिलियन पाउण्डको सम्पत्ति पुग्ने उक्त फलामै फलाम रहेको उपग्रहको जाँचका लागि नासाले अभियान चलाउने भएको छ । जसका लागि नासाले स्पेस एक्सका मालिक एलन मस्कसँग उनको अन्तरिक्षयान मार्फत जाँच्ने अभियान सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
नासाको अनुसार उक्त उपग्रहको व्यास २ सय २६ किलोमिटर रहेको छ । उक्त उपग्रहले सुर्यको परिक्रमा गर्न ५ वर्ष लाग्ने र त्यहाँ एकदिनमा ४.१९६ घण्टाको एकदिन हुने पनि नासाले उल्लेख गरेको छ । उक्त उपग्रहको तौल चन्द्रमाको १ प्रतिशत रहेको छ, जसमा परै फलाममात्रै रहेको नासाले दावी गरेको छ । यो उपग्रह मंगल र बृहस्पतिको बीचमा रहेको छ । उपग्रहलाई पृथ्वीको नजिक ल्याउने योजना बन्न नसकेकाले त्यहीँ गएर जाँच गर्नुपर्ने नासाले भनेको छ ।
उपग्रहमै गएर जाँच गर्नका लागि योजना बनिरहेको पनि नासाले खुलासा गरेको छ । नासाको अनुरोध अनुसार स्पेस एक्सले आफ्नो अन्तरिक्षयान उपग्रहमा पठाएको अवस्थामा अध्ययन सकेर फर्कन पुरा सात वर्ष लाग्नेछ ।
प्रकाशित मिति २४ फाल्गुन २०७६, शनिबार १८:०५